Author: JoJoshura Tojakazahn
Your email address will not be published. Shaqaalaha Dawladda ee Rayidka ah 1 Xukuumadda Federaalka iyo Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka waxay shaqaalasanayaan hawl-wadeennadooda.
Magacaabidda Guddiyada Heer Federaal Xorriyadda xirfadda, Shaqada iyo Mihnadda Dhaqangelinta Xuquuqda Asaasiga Ah 1 Xuquuqda asaasiga ah iyo xorriyadda lagu aqoonsaday qaybtan waa in la dhowraa marka kasta oo sharci la dejinayo lana fulinayo.
Golaha Wasiirrada waa ay ka iman karaan xubin ka mid ah Golaha Shacabka iyo xubin aan ka mid aheyn Golaha Shacabkaba. Guddiga La dagaalanka Musqmaasuqa: Xilka Xeerdejinta ay wadaagaan labada Gole Xilka sharci-dejinta ee ay wadaagaan labada gole waxaa ka mid ah: Qodobka aad- Qodobada ku dabaqma wax ka badelka Dastuurka ku meel gaarka ah Jadwalka koowaad Cama sharci lagu xusay jadwalka koowaad D ee Dastuurkan ka hor inta aanay dhammaan xilliga koowaad ee Baarlamaanka Federaalka: Xorriyadda iyo Nabadgelinta Qofnimada Magacaabista Saraakiisha Darajooyinka Sare Hawlwadeennada iyo Saraakiisaha darajooyinka sare ee Dawladda uu sharcigu tilmaamo waxaa magacaabaya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, ka dib markuu arko soo jeedinta Golaha Wasiirrada.
Xorriyadda iyo Nabadgelinta Qofnimada 1 Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay xorriyaddiisa shakhsiga ah iyo nabagelyada qofnimadiisa. Durid Sharci 1 Sharci maray habraaca ansixinta sharciyada iyo dhaqangeliddaba waxaa lagu duri karaa oo keliya inuu ka soo horjeedo Dastuurka. Waxabarashada 1 Waxbarashadu waa xuquuq aasaasiga ah ee ay leeyihiin dhammaan muwaaddiniinta Soomaaliyeed.
Curinta sharciyada 1 Sharci qabyo ah oo heer qaran ah, waxaa curin kara: Shuruudaha Xubinnimada Baarlamaanka Federaalka Xorriyadda Diinta iyo Caqiiddada Cutubka 16aad – Qodobbada Guud.
Wada-xaajoodyada Caalamiga 1 Iyada oo la qaddarinayo nuxurka iskaashi ee lagu shaqaynayo, xukuumadda Federaalku waa in ay Dawlad- goboleedyada kala tashataa wada-xaajoodyada la somaaliya kaalmada dibedda, ganacsiga, cahdiyada ama arrimaha muhiimka ah ee la xiriira heshiisyada caalamiga ah. Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa 1 Musharraxa Madaxweynenimada ama ku-Xigeenka Madaxweynaha slomaaliya soo jeedin karaa xisbiyada siyaasadeed ama wuxuu noqon karaa Musharrax madax-bannaan.
Sharci-dejinta Federaalka ee Arrimaha Maaliyadda Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Hawlwadeennada iyo Shaqaalaha Dawladda a Hawlwadeennada iyo Shaqaalaha Dawladdu waxay xilkooda u gudanayaan si waafaqsan sharciga iyo danta guud oo keliya. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano.
Qoddodba ay ku heshiiyaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamullada ayaa sidoo kale la sheegay in loo badeli doono qoddobo dastuuri ah. Cutubka 14aad Maaliyadda Guud.
Shuruudaha u Doorashada Madaxweynennimada Qofna laguma qasbi karo in lagu sameeyo tijaabo takhtareed ama mid cilmibaariseed, haddii qofka ama xigtadiisa dhowi aynan oggolaanin islamarkaasina aysan jirin talo uu bixiyey xeeldheere caafimaad marka uusan qofku sharciyan awood u lahayn inuu wax oggolaado. Waajibaadka Caalamiga Ah Inta heshiiska wax waajibinaya ee jirey taariikhda uu Dastuurkan dhaqan gelayo uu waqtigiisu dhacayo ama wax laga beddelayo, waajibka heshiiskaa ka dhashey sidiisa ayuu u jirayaa Qodobka aad.
Xilalka Golaha Wasiirrada Golaha Wasiirradu waxa uu leeyahay awoodaha soo socda: Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub.
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah wuxuu leeyahay awood sharci- dejin oo ah: Muddada Xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda. Cutubka 15aad Sugidda Nabadda iyo Ammaanka Qaranka. Xaqa kan waxaa ka mid ah: Guddiga dib-u-eegista iyo Hirgalinta Click here somaaliya sign up.
Xaqaas waxaa ka mid ah inuu abaabulo ama ka mid noqdo ururro ay ka mid yihiin ururro shaqaale ama xisbiyo siyaasadeed. Iyadoo la tixraacayo Dastuurka, Guddiga Xuquuqda Aadmiga, wuxuu yeelahanayaa awood uu ku fuliyo hawlahan: Asaaska Maxkamadda Dastuurka 1 Dastuurkani wuxuu aasaasayaa Maxkamadda Dastuurka oo ka kooban shan garsoore oo uu ku jiro Garsooraha Sare iyo ku xigeenka Garsooraha Sare.
Awoodaha Maxkamadda Dasyuurka 1 Maxkamadda Dastuurku waay yeelaneysaa awoodahan u garrka ah: Ka warbixinta cabashada iyo waxyaabaha uu adeegaha gardoonka dadweynaha ka ogaadey arrinta, dastiurka gudbiyo madaxda qofka dembiga geystey; 3.